Dhuusomareeb oo laga sameeyah Howlgal Dad lagu soo qabtay
HomeWararka SomaliyaDhuusomareeb oo laga sameeyah Howlgal Dad lagu soo qabtay
March 1, 2021 Wararka Somaliya, Wararka Maanta 0
Ciidamo isugu jira Booliis iyo Nabadsugid ayaa howlgallo ka fuliyay Xaafado ka tirsan Magaalada Dhuusamareeb Ee Caasimadda dowlad Goboleedka Maamulka Galmudug.
Howlgalka oo socday todobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa horay si wada jir ah u iclaamiyay Wasiirka Amniga Galmudug Acmed Macalim Fiqi iyo Saraakiisha qeybaha kala duwan ee Ciidamada ayaa laga Sameeyay gudaha iyo duleedka Magaalada Dhuusamareeb.
Intii uu socday howlgalka oo ay hugaaminayeen Taliyaha Saldhiga Booliiska Dhuusamareeb G/le Maxamed Mire Maxamuud iyo Taliyaha Cusub ee dhawaan loo soo magacaabay Ciidanka Nabada magaladda Dhuusamareeb Gaashaanlle Cabdishakuur Daahir Ducaalle (Golongolo) ayaa lagu baarayey gaadiidka kala duwan ee isticmaalla wadooyinka Xaafadaha iyo bartamaha laamiga ee Caasimada Dhuusamareeb.
Taliyaha Saldhiga Booliiska ee Dhuusamareeb G/le Maxamed mire maxamuud oo howlgalka kadib warbaahinta kula hadlay Gudaha Saldhiga ayaa ka warbixiyay shaqada Amaan xaqiijinta aheyd oo uu sheegay in ay Socotay maalmihii lasoo dhaafay siina wadi doonaan howlgalka iyaga oo la kaashanaya Hay’adda Nabadsugida iyo sirdoonka qaranka.
Howlgalkan ayaa waxaa uu kusoo aaday Beegmaya xilli wasiirka Amniga Galmudug uu Amray Saraakiisha qeyb baheeda kala duwan in laqaado talaabo iyo Howlgalo Amniga lagu xaqiijinayo kuwaasi oo laga sameynayo guud ahaan Deegaanada Galmudug.
Muqdisho oo lagu dilay labo wiil oo dhalinyaro ah
Shacabka iyo Ganacsatada Gobalka Banaadir oo Amaro la duldhigay